Madaa ka socota Urur goboledka IGAD oo soo gaaray magaalada Muqdisho si aay u la hadlaan dowlada iyo maamul goboledyada dalka – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaMadaa ka socota Urur goboledka IGAD oo soo gaaray magaalada Muqdisho si aay u la hadlaan dowlada iyo maamul goboledyada dalka
Hiiraan Xog, Xogeyaha guud ee urur goboleedka IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Maxamed Cali Guyo ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula qaatay xubno ka tirsan guddiga joogtada ah ee aqalka Sare ee Soomaaliya.
Kulanka ayaa looga hadlay xaaladda ka jirta dalka gaar ahaan khilaafka ka dhax jira dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, sidoo kale xubnaha ayaa isla soo qaaday colaadda ka dhaxeysa maamulada Puntland iyo Somaliland.
Xoghayaha guud ee aqalka sare Cali Maxamed Jaamac ayaa sheegay in xubnaha ka socda IGAD ay bogaadiyeen doorka aqalka sare uu ka qaadanayo xal u helidda khilaafka ka dhex jira dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
“Arrimo dhowr ah ayaan ka wada hadalnay, dhamantoodna waa isku afgaranay, IGAD waxay bogaadisay doorka aqalka sare uu ka qaadanayo xal u helidda khilaafka siyaasadeed ee ka dhax jira dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada”ayuu yiri xoghayaha guud ee aqalka sare.
Cali ayaa tilmaamay in wafdiga ka socda urur goboleedka IGAD ay isku afgarteen inay muhiim tahay in laga shaqeeyo nabadeynta deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool.
Maamulada Puntland iyo Soomaaliland ayaa ku hardamaya gacan ku heynta deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool iyadoo labada dhinac mid kasta uu sheeganayo lahaanshaha deegaanka.
AKHRISO:- Duqa magaalada Beledweyne oo xilka laga qaaday iyo Duq cusub oo la magacaabay